नेपालकै दोस्रो लामो पु’लमाथि गाडी गनन, प्रधा’नमन्त्री ओलीले गरे भब्य उद्घाटन ! longest bridge in Nepal – Onlines Time
नेपालकै दोस्रो लामो पु’लमाथि गाडी गनन, प्रधा’नमन्त्री ओलीले गरे भब्य उद्घाटन ! longest bridge in Nepal
January 25, 2021 January 25, 2021 onlinestimeLeaveaComment on नेपालकै दोस्रो लामो पु’लमाथि गाडी गनन, प्रधा’नमन्त्री ओलीले गरे भब्य उद्घाटन ! longest bridge in Nepal
नेपालकै दोस्रो लामो पुलमाथि गाडी गनन, प्रधानमन्त्री ओलीले गरे भब्य उद्घाटन !longest bridge in Nepal
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकाको राप्ती नदीमा निर्माण भएको पुलको उद्घाटन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट पुल उद्घाटनका लागि राप्ती उपत्यकाको सिसहनिया पुगेका हुन्।
उनलाई लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल, मन्त्री, प्रदेशसभाका सदस्य र प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्य तथा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीले स्वागत गरेका थिए। पुल उद्घाटनपछि उनले राप्ती गाउँपालिका–२ लालमटियामा आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राप्ती नदीमा निर्मित पुलको अवलोकनसमेत गरेका छन्।
राप्ती गाउँपालिकाको सिसहनिया र गढवा गाउँपालिकाको महदेवा जोड्ने गरी नेपालकै दोस्रो लामो पक्की पुल हो । पूर्वनिर्धारित समयभन्दा चार महिना अगाडि नै निर्माण भएको पुलको लम्बाइ ८६० मिटर र चौडाइ साढे १० मिटर छ । करीब रु एक अर्ब लागतको सो पुल चार वर्षभित्र बनाइसक्ने सम्झौता भएको थियो । पुल निर्माणपछि देउखरी क्षेत्रका सिसहनिया–महदेवा वारिपारि गर्न सहज भएको छ । यसअघि वर्षायाममा उर्लिएको भेलमा जोखिमपूर्ण तरिकाले राप्ती नदीमा डुङ्गाबाट वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । पुल निर्माण भएसँगै देउखुरीबासीलाई यात्रा गर्न सहज हुने छ ।
पुल निर्माणबाट साविकको गोबरडिहा गाविस र साविकको सिसहनियाँ क्षेत्रका बासिन्दा लाभान्वित भएका छन् । पछिल्लो समय पुल पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास भएको छ । दाङ जिल्लाका मात्रै नभएर बाहिरी जिल्लाबाट समेत आन्तरिक पर्यटक यहाँ आउने गरेका छन् । अहिले गढवा गाउँपालिकाअन्तर्गत पर्ने राप्तीपारिको क्षेत्रबाट आउँदा कालाकाटे–भालुवाङ हुँदै करीब डेढ घण्टाको सवारी साधनबाट यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ । पुल निर्माणसँगै १५ मिनेटभित्रै वारपार गर्न सकिने भएको छ ।
बर्दियाको गेरुवा नदीमा पुल बनाएकै कम्पनी द एएनके लुम्बिनी वाइपी जेभीले देउखुरीको राप्ती नदीको पुल बनाउने जिम्मा पाएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २०७३ मङ्सिर २२ गते पुल शिलान्यास गरेका थिए।
तेस्रो लि*ङ्गीमाथि प्रह’रीको घि*नलाग्दो हर्कत,ना*ङ्गै बनाएर कुट*पिटदेखी यौ*न शो’षणसम्म गरिएको गुनासो
Exclusive: श्री’मान नेपाल आएर पैसाको हिसाब मागेपछि श्री’मती पुगिन नारायणी नदीमा, भेटियो लुगा र चप्पल।
आमा संगै सपनाको रुवा”बासी | सम्मान र सहयोगको ओहिरो, भाव्बिहोल भए पुण्य गौतम Sapana Roka (सम्मान स्वरुप सेयर गराै)
November 27, 2020 November 27, 2020 onlinestime
रमेश र नन्दाको बिहे बिवादमा आएपछि रमेश र कल्पना एक साथ मिडियामा ।। Ramesh Parsain_Kalpana Dahal
झाक्रीले काली चढेकी महिलालाइ सम्हाल्न सकेनन,थानमा लडीबडि गर्दै डरलाग्दो कुरा बकेपछि सबै भागे (भिडियो सहित)